Vhidhiyo: Unyanzvi hweData Kuona | Martech Zone
Vhidhiyo: Unyanzvi hweData Kuona
Chitatu, Ndira 29, 2014 Chitatu, Ndira 29, 2014 Douglas Karr
Sezvo isu tichishanda nedata uye makuru data seti uye vatengi, tinoona kuti data rinova nenjodzi kana tikamirirwa zvisizvo kana kuturikirwa zvisizvo. Vatengesi dzimwe nguva vanotora mukana weizvi kushandura dudziro kuti ibatsire mutengi. Izvi zvinosuruvarisa nekuti zvinogona kutungamira mukukanganisa kutarisira. Kutarisa dhata kunogona kunge kuri kunyengedza, asi data rekuona rinogona kunge richitaura.
Patinenge tichishanda ne infographics, iwo maratidziro ekuona anofanirwa kuve kubva kune yakafara nyaya kuzasi kwemhedziso ruzivo runotsigira iyo nyaya. Dhizaini ndiyo inounza nyaya nedata pamwechete kuti vataure meseji zvinobudirira. Isu tinowanzo tangisa kutsvagisa uye dhizaini panguva imwe chete kuti tirege kurega data richikunda kana kukanganisa nyaya yakazara. Ini ndinotenda akawandisa akawanda infographic dhizaini anotanga nematoni e data uye ndongoirutsa kunze mune yakanaka dhizaini. Matanho akanaka, asi iyo nyaya yakakosha zvakanyanya kupfuura zviga!
Ichi ipfupi rakakura kubva kuPBS pakuona kwedata:
Tags: Kuona Dhiyabhorosi